ဗီယက်နမ်ကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တော့မည့်အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
October 13, 2009 — mmweather
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA သည် လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေအား Sầm Sơn မြို့အနီးမှ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ Sầm Sơn မြို့သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ မြောက်ပိုင်း Thanh Hóa ပြည်နယ်တွင်တည်ရှိသော ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့လေးဖြစ်ပါသည်။ မုန်တိုင်းသည် ၄င်းပြည်နယ်အတွင်း Hoang Thanh နှင့် Hoang Phu မြို့နှစ်မြို့အကြားမှဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး ကုန်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်စဉ် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၄ဝ မှ မိုင် ၅ဝ အထိရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ မုန်တိုင်းဒီရေမှာ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၃ဝ နာရီသတင်းရရှိချက်အရ ၁၁ ပေ ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအချိန်တွင် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA သည် ဟိုင်နန်ကျွန်းအားဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးနောက် မူလက ခန့်မှန်းထားသကဲ့သို့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ်အားပျော့သွားခြင်းမရှိပဲ ဟနွိုင်မြို့၏ အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၁၃ဝ ခန့်တွင် ဗဟိုပြုကာ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးနောက် လေဖိအားနည်ရပ်ဝန်းအဖြစ်အားပျော့သွားမည်ဖြစ်ပြီး လာမည့် ၃၆ နာရီ (အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၄း၃ဝနာရီ) အထိလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ်ဆက်လက်တည်နေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း TSR ခန့်မှန်းချက်တွင်တွေ့ရှိရပါသည်။
Sầm Sơn isaresort town in Northern Vietnam, situated 16 km east of Thanh Hoa Province’s capital, Thanh Hoa, on the shore of the South China Sea.
Thanh Hóa is the capital city of Vietnam’s Thanh Hóa Province. The population of Thanh Hóa city is nearly 200,000 with an area of only 57.9 square kilometers.
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA သည် လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေအား Sầm Sơn မြို့အနီးမှ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ Sầm Sơn မြို့သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ မြောက်ပိုင်း Thanh Hóa ပြည်နယ်တွင်တည်ရှိသော ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့လေးဖြစ်ပါသည်။ မုန်တိုင်းသည် ၄င်းပြည်နယ်အတွင်းသို့ ဆက်လက်ဝင်ရောက်ပြီးနောက် Hoang Thanh နှင့် Hoang Phu မြို့နှစ်မြို့အကြားမှဖြတ်ကျော်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး ကုန်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်စဉ် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၄ဝ မှ မိုင် ၅ဝ အထိရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ မုန်တိုင်းဒီရေမှာ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၃ဝ နာရီသတင်းရရှိချက်အရ ၁၁ ပေ ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
Sầm Sơn isaresort town in Northern Vietnam, situated 16 km east of Thanh Hoa Province’s capital, Thanh Hoa, on the shore of the South China Sea. Thanh Hóa is the capital city of Vietnam’s Thanh Hóa Province. The population of Thanh Hóa city is nearly 200,000 with an area of only 57.9 square kilometers.
မြန်မာစံတော်ချိန် အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက် ညနေ ၂ နာရီတွင် ရရှိသော ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံ
ယခုအချိန်တွင် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA သည် ဟိုင်နန်ကျွန်းအားဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးနောက် မူလက ခန့်မှန်းထားသကဲ့သို့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ်အားပျော့သွားခြင်းမရှိပဲ ဟနွိုင်မြို့၏ အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၁၃ဝ ခန့်တွင် ဗဟိုပြုကာ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးနောက် လေဖိအားနည်ရပ်ဝန်း အဖြစ်အားပျော့သွားမည်ဖြစ်ပြီး လာမည့် ၃၆ နာရီ (အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၄း၃ဝနာရီ) အထိလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ် ဆက်လက်တည်နေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း TSR ခန့်မှန်းချက်တွင်တွေ့ရှိရပါသည်။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: PARMA, tropical-storm, weather. LeaveaComment »
« အပူပိုင်းမုန်တိုင်း-PARMA ဗီယက်နမ်ပင်လယ်ကွေ့သို့ရောက်ရှိ
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA update 14OCT-01 »